सविता विमली - नारी
सविता विमलीका लेखहरु
सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला साढे आठ वर्षअघि पत्नी हत्या आरोपमा समातिएका थिए । उनीबाट उक्त घटना नहुँदो हो त हाल उनी सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकबाट निवृत्त भइसक्ने थिए ।
सविता विमली, आश्विन १२, २०७७
धूमधाम विवाह कि जीवन ?
सम्बन्धमा शरीरसम्म पुग्न प्रेममा कति डुब्नुपर्छ ? प्रेमले कति यात्रा तय गरेपछि शरीर भेटाउँछ ? सिउँदोमा सिन्दूर भरेकै आधारमा कसैको शरीरमाथि आफ्नो हक स्थापित भएको दाबी के–कति कारणले पुग्छ ? शरीरसम्म पुग्न यस्तो दाबी गर्नेहरूले पहिला मनसम्म पुग्न के–कति कसरत गरेका हुन्छन् ?
सविता विमली, फाल्गुन १८, २०७६